Global Voices teny Malagasy » Fomba Fampiasa Twitter Mety Hanapaka Tarangana Ny Fampielezankevitra Politikanao Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Marsa 2013 11:20 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Akon'ny RuNet
Tany ampiandohan'ity herinandro ity, nahiliky  [ru] ny mpitsara iray tao Krasnodar tsy hifaninana ho mpanolotsain'ny tanàna ny mpanao politika iray, taorian'ny nanamarinana fa nandika ny lalàna napetrak'ireo tambajotra sosialy telo malaza ety anaty aterineto ny antontan-kevitra nampiasainy hampielezana hevitra : Twitter, Facebook, sy Vkontakte. Inona marina no tena helok'ilay rangahy ity? Nandefa doka miloko mainty sy fotsy izay nahitàna ny fangon'ireo tranonkala telo ireo tao anatin'ny fampielezankeviny, izay milaza amin'ireo mpamaky fa azon'izy ireo atao ny mizaha vaovao misimisy kokoa mikasika ny fampielezankeviny ety anaty aterineto. (Voampanga ihany koa izy ho manjono ireo mpifidy amin'ny fampanantenana azy ireo fanampiana maimaimpoana momba ny lalàna.)
Ny avy amin'ny lafy voampanga, izany Gennady Ufimtsev izany, dia mpikambana iray avy amin'ny antoko mpanohitra “Just Russia”, ary manatevina laharana an'i Anatoly Ovechko, mpiara-mikatroka ao amin'ny filankevitry ny tanàna sy mpirotsaka avy amin'ny Antoko Kaominista, izay nofoanan'ilay Mpitsara Viacheslav Riadnev avy amin'ny LFitsarana ao Leninskii Raion  [ru] ihany koa ny firotsahany any Krasnodar. (Ovechko dia voalaza ho nanitsaka ny lalàna mifehy ny famatsiana vola ny fampielezankevitra tamin'ny fandaniana nihoatra ny arivo dolara  [ru] noferana ho ny fetra ambony indrindra.)
Sarin'ilay fampielezankevitra mahabe resaka. Dikasary avy ao amin'ny YouTube. 4 Martsa 2013.
Na mety ho sarotra ihany aza ny hino azy, mety ho tena nanitsaka marina ny fepetra voarakitra momba ny fampiasàna ny marika  Twitter ny doka tao anaty gazety nataon'i Ufimtsevof. Twitter dia manolotra ny mari-pamantarana ny orinasany anaty loko efatra samihafa (ity no fahatelo amin'ireo asa famoronan'ilay orinasa, nampiasaina tamin'ny Jona 2012, anasongadinana fotsiny kisarim-borona kely iray). Tany anatin'ireo fitaovana fampielezankevitr'i Ufimtsev, ny sary faharoa noforonin'ny Twitter no nampiasainy, izay faritan'nytar-dàlan'ny Twitter amin'ìzao fotoana ara-teknika ho zavatra iray “Tsy fanao.”
Raha Ufimtsev manana ny Mpitsara Riadnev mba hisaorana noho ny fanamelohana sy fanilihana azy tsy hahazo hirotsaka ho mpanolotsain'ny tanàna, mety tsy nisalasala ihany koa ny faniriany hanitatra ny fankasitrahany ho any amin'ny mpifaninana aminy, Rinat Galliamov, mpikambana iray avy amin'ilay antoko vaovao “Cities of Russia” (fitaovan'ny governemanta, angamba novolavolaina  [ru] hanimbàna ny firaisankinan'ny mpanohitra). i Galliamov no ilay lehilahy nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsaràna. Ary tsy mitsahatra eo ny “lisitr'ireo fahavalo” ! Ny 6 Martsa, ao anaty lahatsoratra am-bilaogy iray [ru] tao amin'ny LiveJournal, notsongain'i Ufimtsev manokana i Maxim Burlachko, mpirotsaka iray hompanolotsain'ny tanàna avy amin'ny United Russia, izay tsy iza fa ny zanakalahin'ny filohan'ny kaomisiona momba ny fifidianana ao Krasnodarskii krai.
Raha toa ka nihevitra tokoa ny hanadio ny fifidianana izay ho mpanolotsain'ny tanàna ao Krasnodar amin'izay mpirotsaka manelingelina rehetra avy amin'ny mpanohitra ny Mpitsara Riadnev, toa lasa aloha loatra iray andro mialoha ny hetsika nataony. Koa satria efa lasa izy ity, tsy hanan-kery aloha ny didim-pitsarana manameloka an'i Ufimtsev sy Ovechko hatramin'ny 11 Martsa — andro iray aorian'ny fahataperan'ny fifidianana  [ru] izay ho mpanolotsain'ny tanàna . (Tahaka ny tsy nandray ho ao anaty kajikajiny ny fialantsasatry ny 8 Martsa Andro Erantany Natokana ho an'ny Vehivavy ireo mpiray tsikombakomba.) Raha amin'ny teny hafa, afaka samy miatrika fifidianana irao kandidà roa ireo amin'ity faran'ny herinandro ity. Raha mahazo seza ry zareo, mety ho foana daholo ny valim-pifidianana raha vantany ka miditra manankery ilay didim-pitsaran'i Riadnev amin'ny Alatsinainy.
Tsy ireo natao hokiviana akory, ireo solotena araka ny lalàna an'i Krasnodar dia nanao fampakàrana faingàna (na mbola tsy nisy fanangonan-tsonia hamelezana ny ankilany aza ry Ufimtsev sy Ovechko), nadefa ny taratasy misy ilay didy ho any amin'ny Fitsarana TAmpony hodinihana ny Sabotsy 9 Martsa. Io dia hahafahan'ny mpitsara iray hafa manamafy ny didin'i Riadnev sy mihazona ireo kandidà roa hijanona any ivelan'ny fifidianana farany.
Ao anatin'ity raharaha ityihany, ny vavahadin-tserasera “The Caucasian Knot” dia niteny  [ru] tamin'ny solontenan'ny GOLOS  tao an-toerana sy ilay mpikatroka mafàna fo mpiaro zon'olombelona, Mikhail Veligodskii, izay nanipika fa zavatra mandeha ho azy ho an'ireo mpanao politika mifaninana ny manao izay zavatra rehetra azony atao handemena (na hanesorana mihitsy aza) ireo mpifanandrina amin-dry zareo. Ny tena fanamby, hoy ny sosokeviny, dia ny fametrahana “ireo lalànam-pifidianana henjana ao Rosia sy ireo olana momba ny fahaleovantenan'ny mpitsara.” Rehefa ho any amin'ny biraom-pifidianana amin'ity Sabotsy ity, mila manotany tena ireo mpifidy ao Krasnodar he iza amin'ireo mpirotsaka sisa tavela no manolotra vahaolana amin'izy ireny sy ny olana hafa atrehan'ny faritra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/09/46624/
 LFitsarana ao Leninskii Raion: http://krasnodar-leninsky.krd.sudrf.ru/modules.php?name=gbook
 nihoatra ny arivo dolara: http://fedpress.ru/news/elections/reviews/1362393829-kandidata-v-gordumu-krasnodara-mogut-snyat-za-feisbuk-i-tvitter
 voarakitra momba ny fampiasàna ny marika: https://twitter.com/logo/
 angamba novolavolaina: http://lenta.ru/articles/2012/09/03/party2/
 lahatsoratra am-bilaogy iray : http://ufimcevg.livejournal.com/1067.html
 dia niteny: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/221114/